डा. प्रभा कैनी - कान्तिपुर समाचार
गत मङ्सिरमा एक बहिनी आफ्नो विवाहको निम्ता दिन मकहाँ आइन् । उनको हातमा रातो बुट्टेकार्ड र अनुहारमा उधुम प्रसन्नता देखिन्थ्यो । हितैषी र आफूले विशेष सम्मान गर्ने केही व्यक्तिलाई आफैं निम्तो दिन हिंँडेकी रहिछन् । निकै फरासिली बहिनीले भनिन्, ‘म्यारिज इज क्रिएटेड इन हेभन, हैन र दिदी ? त्यही हेभनको अनुभूत गर्न गइरहेकी छु । मेरो खुुसीमा हजुर अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ ।’
डा. प्रभा कैनीका लेखहरु :